DAAWO: Al-Shabaab oo shaacisay muuqaalka ninkii isku Qarxiyay Hotel SYL – Kismaayo24 News Agency
by admin 28th January 2020 28th January 2020 0175
Ururka Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay muuqaal ku saabsan sida uu u dhacay weerarkii Hotel SYL lagu qaaday 11-kii Bishii December ee sanadkii 2019,kaas oo khasaaro kala duwan sababay.
Mu’assasada Al-kataa’ib oo ah garabka warbaahineed ee Xarakada Alshabaab ayaa soo saartay Filimkan cusub.
Filimkan oo ah qeybta 2aad ee silsilad cusub ayaa lagusoo gudbinayaa dardaarannadii ay ka tageen raggii hubeysan ee weerarkaas fuliyay,waxaana si gaar ah diirada loogu saaray dardaaran uu ka tagay Jaabir Cabdullaahi Xasan oo ah ismiidaamiyihii weerarkaas.
Al-Shabaab ayaa sheegay in Dagaalyahankan uu weerar naf hurnimo ku galay Hotelka SYL ee kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho, weerarkaas ayaa sababay khasaare soo gaaray askar iyo mas’uuliyiin ka tirsanaa dowladda iyo dad shacab ah oo Hotelka ku nasanayay.
Photonews : Muuqaaladii laga soo qaaday shirkii Kismaayo iyo xal u raadinta go'aanka GOOBWEYN. DAAWO.
Waxaa maalintii afaraad ka socda nawaaxiga isgoyska Zoope ee magaalho hada Muqdisowlo baaritaano lagu raadinayo meydadka dad weli nolol iyo geeri lagu weysan yahay
Dagaal Qarar oo ka socda Duleedka Kismaayo